Alara Amahhotela Star 5 * (Antalya, Turkey): ukubuyekezwa, iholide
Uma ufuna ukuchitha iholide elikhulu e-Turkey oluyohlala ngesikhathi esifanayo endaweni ukhululekile, indawo kodwa ezingabizi, le Alara Star Ihhotela 5 * (Alanya) kungaba indlela enhle kakhulu.
Leli hhotela five star itholakala amakhilomitha amathathu ukusuka edolobhaneni resort of Avsallar no-23 km ukusuka edolobheni Alanya. Ibanga ukusuka enhlokodolobha izivakashi Turkey - Antalya - ingamakhilomitha angu-100. Endleleni kusuka esikhumulweni sezindiza ehhotela kuthatha cishe amahora amabili.
Ama ifotho, incazelo
Ihhotela Alara Star Ihhotela 5 * lakhiwa ngo-2005. Kusukela ngaleso sikhathi uye eyenziwa izikhathi eziningana kulungiswe. Zokuhlala zokuhlala okufakiwe 195 amakamelo izigaba ezilandelayo: (. 42 square metres) ejwayelekile double (. 25 sq Amamitha), eyodwa (. 15 sq Amamitha) nomkhaya. Zonke amafulethi babe ifenisha kudingekile, ikhebula TV (kufaka ngesiRashiya), isiqandisi, ephephile, air conditioning, kuvulandi kwanikeza kanye nekamelo lokugezela ne hairdryer. Yokuhlanza kwenziwa nsuku zonke.
Le ndawo ngensimu yehhotela ngokwayo kuyinto ayizinkulungwane 7 sq. M. amamitha. Kukhona ongaphandle indawo yokubhukuda, ilanga ithala, ukuvakasha edeskini, esitolo, bar, restaurant, yokupaka. Ihhotela izivakashi zijabulela khulula zokungena inthanethi endaweni yokwamukela izivakashi eduze reception.
Ezokudla ihlelwe ngokuvumelana "ultra-ol okufakayo". Izivakashi nethuba udle wanikela isiphuzo nganoma isiphi isikhathi sosuku.
Ngokuphathelene nomqondo ehhotela ke, ngokuvumelana bakithi abayibekile silibeke lapha, it is zihlose kakhulu ezolile kulinganiswa abahambi umndeni ukuphumula kanye nabantu asebekhulile. Youth nakho kungaba isidina lapha. Ezikhona zezivakashi ikakhulukazi emelelwa abahambi abavela eRussia. Cishe 10% of the izivakashi izivakashi ezivela eNtshonalanga Yurophu.
Alara Star Ihhotela 5 *: Izibuyekezo lezihambi kusukela Russian Federation
Njengoba wazi, abaningi izivakashi zanamuhla elikhulu indlela obhekene eholide bekuhlela ne ngokukhethekile kukhethwa ehhotela ezweni elithile emhlabeni. Futhi akusiyo nje mayelana nemali. Phela, akekho ofuna udumazeke, njengoba ayefike ngesikhathi iholide eside elindelwe. Ngakho-ke, abahambi nje kuphela ukufunda incazelo esemthethweni ehhotela, kodwa futhi zama bajwayelane inani elikhulu kunawo kungenzeka imibono ngabantu abaphila ngempela ababezalwa baye bahlala kule ndawo muva nje. Lokhu kuvumela okuphelele xaxa futhi eduze real isimo isithombe ehhotela. Ngakho-ke siphakamisa ukuthi uzijwayeze impendulo generalized bakithi mayelana kokuhlala kwawo ehhotela ngaphambi kwethu.
ejensi Izikhangibavakashi ukunikela izakhamizi Russian Turkey izinkambo, Alara Star Ihhotela 5 * uchazwa ngokuthi ehhotela nge inhlanganisela olukhulu intengo nekhwalithi. Vele uqaphele ukuthi iningi izivakashi abaye bavakashela lapha ngempela yini nalombono kanye zazinzima uyojatshuliswa esizikhethayo izindawo ukuze uhlale, kanti bancoma leli hhotela kubangani nomndeni. Kodwa siyazi everything ngokugcwele.
Ngokuvamile, cishe zonke izivakashi weneliseka izinombolo ezihlongozwayo. Ngakho bathi: ngoba ehhotela awumusha, ifenisha yesimanje nemishini, ngeke ukuthole lapha. Nokho, zonke zisesimweni esihle futhi ukusebenza. Uma into ehluleka ke, ngokuvumelana bezwe kwethu, emva ukuguqulelwa ukwehluleka reception iqedwe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Amakamelo ngokwabo abasakwazi ivulekile, nge balcony kwanikeza kanye nokuvuselelwa kwazo fresh. Nokho, ezinye izimenywa bakhale ngokuthi efulethini emnyama kancane. Nokho, lena akuyona inkinga, ngoba iningi labazalwane izivakashi eza egumbini kuphela ukushintsha izingubo noma kusihlwa ngaphambi sokulala.
Ngokusho abahambi, wonke amagumbi Alara Star Ihhotela 5 * (Turkey) has a ephephile, okuyinto ungasebenzisa mahhala, futhi mini-zokuphuza utshwala, lapho wonke umbiko usuku amabili amabhodlela kwesigamu-litre amanzi. Njengoba for yokuhlanza ke njengoba uthi izakhamuzi nabo, wenziwa nsuku zonke. Amathawula kanye elinemishwe nazo nezincekukazi olusha izikhathi ezimbalwa ngesonto. By the way, ngokuphathelene lolwandle amathawula, bangakwazi umklomelo zonke izinsuku ezintathu Hammam.
Ngokusho bakithi, Alara Amahhotela Star 5 * kuyinto endaweni encane. Ngakho, nansi kuphela yokubhukuda nge ilanga ithala nesigaxa, kanye nenkundla yemidlalo yaseshashalazini. Nokho, akukho izixuku, njengoba izivakashi nothi ningagcini. Le ndawo kakhulu efanayo ukukhombisa izivakashi kakhulu uzilungise, enhle eluhlaza. In the endaweni kukhona amahhotela amabili kunethiwekhi efanayo njengoba "Alara Star". Ngakho izivakashi bakhululekile abangenanga emkhawulweni wonke amahhotela futhi usebenzise yonke ingqalasizinda, ngaphandle lokuphekiwe kanye nezezindlu.
Njengoba kuye kwaphawulwa ukubuyekezwa kwawo bakithi, Alara Amahhotela Star 5 * ezimweni eziningi kuhlonipha imitsetfo yangaphakathi esishoyo ukuthi ucingo emagumbini azo, izivakashi zintsha kuphela emva ihora lesibili ntambama. Nokho, kuyinto akhathalela ngokuyinhloko ukuphakama samaholidi. Uma bahlala eseholidini Septhemba noma Okthoba, ngisho i-ukufika ekuseni cishe akha cishe ngokushesha. Kodwa, ngokusho kwabanye abahambi, yakwazi ukuxazulula le nkinga, ngisho July no-August, ukukhokha esingeziwe isevisi umlawuli isiphetho ekuseni. Ezimweni eziningi, ikamelo khulula enombono omuhle kwaba ngabo cishe ngokushesha, ngisho noma ngaphambi idili uqiniseke ukuthi wonke amafulethi matasa kuwo.
Kule ndaba iningi izakhamizi zabonisa ukuba munye. Ngakho, ngokuvumelana bakithi, ukudla Alara Amahhotela Star 5 * ihlelwe ezingeni ehlonipheke kakhulu. Yokudlela main kwasemini kanye dinner kwakuhlale Ukukhetha enkulu izitsha ezahlukene. Ngokuyinhloko, banikezwe yenkukhu nenhlanzi. A izikhathi ezimbalwa ngesonto, njengoba waqinisekisa izivakashi ehhotela, abapheki ukulungiselela okuthile yenkomo kanye turkey. Ngaphezu kwalokho, izivakashi yokudlela Ungahlala adle isobho, baphathwe ezihlukahlukene salads, appetizers, breads kanye amaswidi. Ekuseni, ukukhetha izitsha kanye izivakashi kwabonakala ngempela ayakufanelekela. Ngokuvamile, njengoba izivakashi uthi okudliwayo ehhotela, unga amahora angu-24 ngosuku. Ngokwesibonelo, ebusuku onganelisa ukulamba isobho, futhi emini (kusukela amahora 10 kuya 16) ungadla okuthosiwe, hamburger, pizza, pasta kanye nokunye okufana nalokho. N. A umthamo bar.
Ngaphezu kwalokho, eziningi izivakashi e Izibuyekezo yabo kakhulu adunyiswe yokudlela Italian "a la Carte".
Kuyaziwa ukuthi cishe zonke izihambi ukuhlala e-Turkey ikakhulukazi ngoba ebhishi ngamaholidi. Ngakho-ke, lokhu kwaba yindaba ekhathaza abantu abaningi, kodwa uhlela uhambo. Ngokuphathelene phambi kwethu Alara Star Ihhotela 5 * (Incekum), kukhona, emazwini izakhamuzi zethu nabo, ungakwazi ukujabulela iholidi lolwandle ukuze afike ekugcineni. Ngakho, leli hhotela cishe ogwini. It has siqu sandy beach yayo. Ngokwe-izivakashi, akusiyo enkulu kakhulu, kodwa ikamelo kokwanele lapha. Ukungena emanzini angajulile kakhulu ngaphandle amatshe. Ukuze kungabikho izicathulo ezikhethekile awudingi. Ngesikhathi sebehlezi ogwini kukhona inombolo ezanele emphemeni izihlalo kanye ilanga izambulela, ibha. Ngokuvamile, abantu bethu bathi ebhishi kuleli hhotela muhle kakhulu.
Njengoba indawo ehhotela akuyona enkulu kakhulu, ukwehluka izinto eziningi zokuzijabulisa, ngokuvumelana izivakashi lapha. Ngakho, emini ungakhululeka ngasechibini. Kukhona ifakwe ilanga ithala loungers kanye ibha nge Ukukhetha enkulu uphuzo. Ichibi ngokwalo sikhulu ngokwanele futhi ihlanzekile. Phakathi Animators usuku ukunikela bonke abafisa ukwenza amanzi Ukuvivinya umzimba ngendlela, yokuzijwayeza, polo yamanzi noma i-volleyball yasolwandle.
Kusihlwa yemidlalo ukuzijabulisa imibukiso. Njengoba kuphawuliwe bakithi, into ekhethekile kuzo ungaphenduki, kodwa kukho konke jikelele ugijimela ezingeni ehloniphekile.
Futhi, ungakhohlwa ukuthi ungavakashela indawo namahhotela eseduze kunethiwekhi efanayo, lapho kukhona ithuba ukuya, isibonelo, kule Hammam kanye sauna.
Njengoba kuye kwaphawulwa ukubuyekezwa kwawo bakithi, Alara Amahhotela Star 5 * hhayi alalelwa izivakashi omncane. Ngakho, emini ngabo mini-club, lapho izingane beveza ezihlukahlukene umzimba fun. Kusihlwa izingane kokuba ukudansa kumnandi e disco mini.
Ukwahlulela ngokubukeka okwashiwo izivakashi, iningi lezakhamuzi zethu nabo okuvelayo omuhle abasebenzi ehhotela "Alara Star" 5 *. Ngakho, ngokuvumelana kubo, izisebenzi lapha inobungane, eziwusizo. Abasebenzi ehhotela bekulungele ukusiza izivakashi wenze umsebenzi oncomekayo nemisebenzi yawo. Ngaphezu kwalokho, cishe bonke abasebenzi ngezindlela ezingafani, ukukhuluma isiRashiya, okuyinto kusiza kakhulu inqubo zokuxhumana bakithi.
Ihhotela "Intandokazi", Gelendzhik: izibuyekezo, izithombe, yocingo
Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona Rixos Bab Al Bahr 5 * (Ras al-Khaimah, United Arab Emirates): incazelo, ukubuyekezwa
Amahhotela Dombai - eziphonsa ibe emangalisayo ski iholide.
Amahhotela e Prague: sokunethezeka, ezishibhile, maphakathi. Dlulisa amehlo phambili ngezibuyekezo nezithombe
Pattaya Emerald: Emerald Ihhotela ngu Sofi 3 *
Amahhotela ukhululekile futhi elula e Patong
"Keratin Global": incazelo, izithombe kanye nokubuyekezwa
Japanese, osekuyisikhathi eside isetshenziswa, - imodeli "Alteza". "Toyota Alteza": incazelo kanye izici
Udweba kanjani Umhlaba iplanethi: ipensela noma eseyi?
Ukuthuthukiswa yokukhuluma izingane zasenkulisa yobudala ngosizo amafomu ezincane temdzabu
Ukubona Belikov e laseChekhov sika "Umuntu in a Case": Ngobani abantu futlyarnoy nokuthi yini ebonakala?
Psychophysiology - Iyini? Ubudala izitho zomzimba kanye psychophysiology
Dentin - Iyini? Izinhlobo, isakhiwo, ukwakheka kanye nezici ukwelashwa
Yayiyini injongo eyinhloko iCommunist International? Ukwakheka iCommunist International
Indlela ukucacisa zohlobo inja: izimpawu ezihlukile thoroughbred